म महासचिवको उम्मेदवार हो, यसमा तलमाथि हुँदैन::Daily Newspaper of Nepal
म महासचिवको उम्मेदवार हो, यसमा तलमाथि हुँदैन
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मुख्य हिस्साको रुपमा रहदैं आएको एनआरएनए मध्यपूर्वले आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्व तहमा सशक्त भूमिकाका लागि पहल थालेको छ । नेतृत्व छनोटमा मध्यपूर्व एनआरएनए निर्णायक रहँदै आएको भएपनि एनआरएनएको नेतृत्वमा मध्यपूर्व पछाडि परेको भन्दै यसपटक मध्यपूर्वका एनआरएनए अभियन्ताहरुले पहल थालेका हुन् । एनआरएनए अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आईसीसी) को अधिवेशन नजिकिदै गर्दा मध्यपूर्बको उपस्थितिलाई अहिले निकै चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । नेपाली कामदारहरुको मुख्य उपस्थिति रहेको मध्यपूर्ब एनआरएनमा कतार, ओमान, युएई, बहराइन, साउदी अरब, ईजिप्ट, ईराक, जोर्डन, कुबेत लगायत ११ राष्ट्रहरु रहेका छन् । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मुलुकका रुपमा रहेका यी देश नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको समेत मुख्य श्रोत मुलुक हुन् । यसपटक केन्द्रीय नेतृत्वका लागि मध्यपूर्बबाट बर्तमान सचिब डिबी क्षेत्रीले महासचिवमा आफ्नो सशक्त दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् । बैदेशिक रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षाको बिषय उठाउने क्षेत्री पहिलो एनआरएन अभियान्ता हुन । उनले हजारे अभियानको नाममा बैदेशिक रोजगारी संचय कोष अभियानको सुरुवात गरेका थिए । नेपाल सरकारले उक्त अभियानलाई सम्बोधन गर्दै हाल कानून निर्माणको क्रममा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा केहीदिनपछि हुनलागेको एनआरएनएको नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर जनसवाल दैनिकका लागि भीमप्रसाद न्यौपानेले क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
एनआरएनएको आगामी कार्यकालका लागि यहाँ महासचिवको उम्मेद्वार भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
पक्कै पनि हो । म महासचिवको उम्मेद्वार हो । महासचिव जस्तो डाइनामिक पदको उम्मद्वारीको लागि मेरो पूर्व अनुभवहरुले मलाई प्रेरित गर्यो । सामाजिक सेवा कै मात्र मनोभावना भएपछि जिम्मेवार पदमा रहेर नै काम गर्दा धेरै प्रभावकारी रुपमा आफ्ना सेवाहरु जनसमाजमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट बुझेर नै मैले सुझबुझपूर्ण ढंगले महासचिव पदमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेको हुँ ।
हल्ला छ तपाइलाई उम्मेदवारी तलमाथि गर्न पार्टीको दबाब छ रे नि ?
मेरो जीवनमा दबाब भन्ने कुराले खासै दबाद दिदैन । म आफैमा पूर्ण विश्वासका साथ आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेको हुँ । मेरो अनुभव र महासचिव पदमा रहेर काम गर्नसक्छु भन्ने भएपछि मैले उम्मेद्वारी दिएको हो । कसैको बहकाउमा दिएको हैन । त्यसर्थ, मलाई कुनै दबाबको मतलब छैन । मलाई मेरो कर्मप्रति विश्वास छ । दबाबलाई म खासै चासोको साथ हेर्दिन । त्यहि पनि मैले एनआरएनएको चुनाबमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेको हुँ । कुनैपनि पार्टीको हैन ।
एनआरएनएमा पनि विभिन्न प्यानल छन् भन्छ्न, तपाई कुन चाहिं प्यानल को उम्मेदवार हो ?
एनआरएनए जस्तो संस्थामा प्यानल वा गुटउपगुट हुनु खासमा असोभनीय पक्ष हो । यद्यपि म वैदेशिक रोजगार प्यानल अन्तर्गत हो । प्यानल भन्दा पनि यहाँ व्यक्ति, उसको छवि, उसको पूर्व अनुभव, उसको सामाजिक नेतृत्व क्षमता र समाजसेवाको मनोभावना बढी महत्वपूर्ण पक्ष हो । मलाई लाग्छ म विगतबाट खारिएर आएको महासचिव पदको लागि उपयुक्त दक्ष उम्मेदवार हुँ ।
तेसो भए तपाई पछि हट्नु हुन्न ?
हा हा । म अघि बढिसकेको मान्छे पछि हट्ने भन्ने कुरा नै मन पर्दैन । म त एनआरएनएमा रहेका तमाम बिकृति र विसंगतिहरुलाई सफा गर्ने, एनआरएनएलाई झन् जनकेन्द्रित संगठन बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका यावत समस्याहरुलाई समाधान खोज्ने हेतुले महासचिवजस्तो महासागरमा पुग्नको निमित्त बगिसकेको नदी हुँ । नदी कहिल्यै रोकिन्छ र ? र मलाई विश्वास छ मेरो विजय सुनिश्चित छ ।
यहाँको कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धताहरु के छन् ?
मेरो प्रतिद्धताहरु धेरै गफाडी स्टाइलको वा पहिले सयौं प्रतिवद्धता गर्ने अनि काम गर्नेबेलामा सिन्को नभाँच्ने खालको हुँदैन । मेरो थोरै, वैज्ञानिक, प्रभावकारी, अत्यावश्यक र अनिवार्य गर्नैपर्ने प्रतिवद्धताहरु छन । जस्तै– मजदुर मैत्री ऐन बनाउने, संगठनलाई थप विश्वसनीय, जनकेन्द्रित बनाउने र नेपालमा बढीभन्दा बढी लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने कुराको सरल समाधान खोज्ने हो । अझ विशेष गरेर एनआरएनएमा पछिल्लो समय देखापर्न थालेको मपाइत्व विकृतिलाई हटाउन मेरो प्रयास रहने छ । एनआरएनए धनीको मात्र संस्था हैन ४० औं लाख मज्ज्दुर को साझा चौतारी हो भन्ने कुरा को पुस्टी गर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो । एनआरएनएमा काम गर्नेको सहि र प्रभावकारी मुल्यांकन हुने परिपाटी बसाल्ने पनि मेरो प्रतिवद्धता हो ।
घोषणा पत्र कहिले आउँछ ?
घोषणा पत्र पनि एउटा अभिलेख मात्र न हो । मलाई त आफ्नै अनुभव र कर्ममा विश्वास लाग्छ । आफ्नै अठोटमा विश्वास लाग्छ । आफ्नै जनचिन्तन मन्नमा विश्वास लाग्छ । यद्यपि, दुईचार दिनमा घोषणापत्र पनि प्रकाशन हुनेवाला छ । मेरो घोषणा पत्रमा हावादारी कुनै पनि पनि प्रतिवद्धताहरु रहँदैनन । तर, बरु विशेष गरी मजदुरहरुका एजेन्डाहरुलाई एनआरएनएका छलफल र ब्यानरहरुमा पहिलो नम्बरमा पार्नु रहनेछ ।
तपाई एनआरएनएलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ ?
म एनआरएनएलाई सबैले देख्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, महसुस गर्न सक्ने, आफ्ना गुनासाहरु र प्रश्नहरु सजिलै राख्न सक्ने सरल र स्पष्ट संस्था जो जमेको तालजस्तो हैन बरु सलल एउटा निश्चित गतिमा बगेको कन्चन नदीजस्तो जस्तो चलायमान बनाउन चाान्छु ।
यहाँको उम्मेदवारीलाई मध्यपूर्वको प्रतिनिधित्वको रुपमा पनि हेरिएको छ, किन ?
मध्यपूर्बका नेपालीहरु नेतृत्वदायी पदमा पुगेर एनआरएन अभियानलाई नेतृत्व दिन सक्छन् भन्ने विश्वलाई बताउन पनि मेरो उम्मेदवारी हो ।े खाडीमा लेबर मात्र हुन्छन, नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दैनन भन्ने खालको अपमानजन्य भ्रमहरु तोड्न आवश्यक रहेको छ । एनआरएन धनीमानीहरुको चन्दाले चलेको संस्था नरहेको भन्दै खाडीका पचासौ लाख मजदूरको साथ र उनिहरुको आर्थिक योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । कसैले भ्रम नराखे हुन्छ, एनआरएन अभियानमा खाडीका मजदूरहरुको पसिना पनि पोखिएको छ, कसैको डलरले चलेको हैन । संस्थामा लागेर दुख गर्ने मध्यपूर्ब, अफ्रिका र मलेसियाका कामदारहरुको अपमान हुने गरी कसैको माया दयाले दिएको पद स्वीकार गरिदैन । नगर्ने संस्थाको महत्वपूर्ण र मुख्य पदहरुमा यिनिहरुको धनसम्पती र क्षमताले पुग्दैन भन्ने भ्रम चिर्न पनि यी क्षेत्रका एनआरएन अभियन्ताहरु एक हुन जरुरीे छ ।
भनेपछि अहिलेसम्म एनआरएनएनमा मध्यपूर्व हेपिएको छ ?
लाखौं नेपालीहरु रहेको मलेसिया र खाडीले हालसम्म महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष र महासचिब पद पाउन सकेको छैन । खाडीमा पनि सक्षम एनआरएन अभियान्ताहरु छन तर नेतृत्वले सधैं हेप्ने काम गरेको छ । संस्थालाई सबै नेपालीको अपनत्व महशुस गराउने, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको हकहीतको लागि एनआरएनलाई समर्पित गर्ने, एनआरएन धनीको चन्दाले हैन गरीबको पसिनाले चलेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि मध्यपूर्बले सफलतापूर्बक नेतृत्वदायी भूमिका पुरा गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न पनि मध्यपूर्बका एनआरएनहरु एक हुनुपर्छ । मध्यपूर्ब कसैको भोट् बैंक मात्र हैन भन्ने प्रमाणित गर्न म महासचिबमा आएको छु । अर्थतन्त्रको एक तिहाई भाग रेमिटेन्समार्फत योगदान गर्ने मध्यपूर्वबाट संघर्ष गर्नेलाई साथ दिने कि पैसावाल र सकेसम्म युरोप अमेरिकावालालाई साथ दिने हो त्यसले नै अग्रजहरुको मध्यपूर्बलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने बुझ्न सकिने छ । म हरेक सरकारसँग मध्यपूर्बका नेपालीहरुको हकहितको लागि लगातार लडिरहेको छु । अझै पनि यसलाई टुङगोमा पुर्याउन जरुरी छ । के मैले एनआरएनमा लागेर मजदूरहरुको सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा उठाउनु गलत भयो ? तसर्थ यो एउटा बर्गीय लडाईं र परिक्षा पनि हो भन्ने बुझेको छु । यदि खाली चिल्ला कुरा मात्र हैन र मध्यपूर्ब प्रती भ्रम छैन भने मलाई सर्बसम्मत महासचिब दिनुपर्छ । र म नै हो अबको एनआरएन आईसीसीको महासचिब ।